Warar - 30 koofiyadood oo baaldi ugu fiican dhammaan noocyada, xilliyada iyo miisaaniyadda 2021
Caafimaadka Haweenka ayaa laga yaabaa inay kasbadaan guddiyo xiriiriyeyaasha ku yaal boggan, laakiin waxaan soo bandhignaa oo keliya alaabada aan aaminsanahay. Maxaad noogu kalsoon tahay?
Marka ay timaado isbeddelada moodada, koofiyadaha baaldiyo ayaa yimaada oo taga sida dabaysha oo kale. Laga soo bilaabo koofiyaddii baaldiga caanka ahaa ee Britney Spears ee 90-meeyadii ilaa ay ugu habboon tahay sidii hadiyad gimmick ah horaantii 2000s, iyo hadda waddada ay ku ordaan (iyo TikTok guud ahaan), koofiyadaha baaldiyo ma aha oo kaliya moodada laakiin sidoo kale waa wax lagu farxo in la xidho—— Iyagu sidoo kale waa kuwo aad wax ku ool ah. Haddii aad raadineysid hab quruxsan oo aad naftaada uga ilaaliso qorraxda xeebta, ama aad dooneysid qalab aad ku raaxeysatid si aad ugu darto xiisaha jooniskaaga soo socda iyo muuqaalka funaanada, waxaa jira xulashooyin loogu talagalay dhammaan qaababka baaldiga loo yaqaan (laga soo qaado qof ilaa bil ka hor, wuxuu aad uga soo horjeeday daboolka baaldi).
Haddii aad raadineyso muuqaal caadi ah, muuqaal gadaal ah, waxaad dooran kartaa intarsia crochet koofiyadaha, oo ka baryaya in lagu daro sawirrada iyo sundresses. Ama waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad xirato wax xoogaa xagal yar marka aad baxayso habeenkii - waa inaad fiirisaa koofiyada baaldiga. Ma heli karaa isbeddel biraha ku filan? Koofiyaddan kalluumaysatada dahabka ah ayaa ku qaylinaysa magacaaga. Waxaa jira xitaa koofiyado baaldi-qoyan oo baaldi ah oo si gaar ah loogu talagalay orodyahannada masaafada dheer (sidoo kale aad ugu habboon maalmaha dhididka ee dhididka!) Iyo koofiyadaha dhogorta dhogorta ah ee dabiiciga ah ee loogu talagalay taageerayaasha koofiyadaha baaldiga xilli kasta.
Koofiyadaha baaldiga ayaa ah qaabkii ugu dambeeyay ee ay qasab tahay inay lahaadaan. In kasta oo aad si xaqiiqo ah u maalgashan karto waxyaabaha raaxada leh, qaybta ugu fiican ayaa ah in badankood ay ka hooseeyaan $ 20, taas oo ka dhigaysa iyaga mid ku raaxeysanaya dhar kasta oo miisaaniyadda dhexdeeda ah Habka ugu dambeeya. Waa kuwan koofiyadaha baaldiga ugu fiican ee aad hadda heli karto:
Haa, tani xaqiiqdii waxay dhoolacadeyn doontaa qof kasta oo adiga ku soo eegaya, laakiin tixgelinta sida aad u qurxoon tahay, waxay kugula mid noqon doontaa adiga.
Waxaa jira 32 midab oo laga kala xusho, ha la yaabin haddii aad dhowr midab ku leedahay qolkaaga goonnada ah. (Xor ayaad u tahay inaad ku bilowdo laba qaybood, si adiga iyo BFF-kaaga aad sidoo kale u qaadan kartaan sawirro iswada eg oo qurux badan.)
Balanbaalista la xardhay waxay muujineysaa xasaasiyad 90s daran, laakiin naqshadeynta fudud waxay ka dhigeysaa koofiyad heer sare ah oo aad u dhigmi karto wax kasta. Cirifka adag, adag ayaa sidoo kale aad ugu habboon ilaalinta qorraxda.
Koofiyadaha baaldiga fudud iyo kuwa caadiga ahi waa ku dhowaad waa inay lahaadaan labis kasta oo moodada ah maanta, laakiin haddii aanad weli hubin inay habkani ku habboon yahay adiga, markaa waxba kuma waayi doontid koofiyadan baaldi oo qiimihiisu yahay $ 8.
Iyada oo leh 12 midabbo dhexdhexaad ah oo daabacan oo la kala dooran karo, waa meel fiican oo laga bilaabi karo (ama lagu horumarin karo) koofiyaddaada baaldi baaldiga ah.
Koofiyadan baaldi unisex waxay leedahay xoogaa duuduub ah oo duuduub ah waxayna ku habboon tahay keydinta taxaddar la'aanta. Intaa waxaa dheer, waxaa laga sameeyaa 100% cudbi, kaas oo raaxo leh oo lagu neefsan karo cimilada diiran.
Tassel-ka koofiyaddan koofiyaddu wuxuu ku habboon yahay mid caadi ah “Oh, waxaas hore? Waan iska dhigay, ”fiiri. Xitaa waxaa lagu ridayaa dhar SPF 50, oo runti madaxaaga ka ilaaliya qorraxda - waxay si fiican ugu habboon tahay bikininkaaga cusub.
Sida ay adag tahay in looga hortago sida Lululemon's lebbisyada aadka loo raadinayo, koofiyaddan baaldiga ah ee laba-geesoodka ah ayaa leh naqshad laba-geesood ah oo jilicsan oo leh dhinac qabow oo gaar ah iyo dhinac xiiso leh oo daabacan. Sida dharka isboortiga oo kale, koofiyaddani waxay isticmaashaa astaanta caanka ah ee afar-geesoodka ah iyo dhar dhidid-dhidid, taasoo ka dhigaysa inay tahay inay lahaato xagaagaas dheer.
Koofiyadan baaldi ka kooban laba qaybood ayaa soo jiidanaysa jawiga weyn ee London waxayna ku habboon tahay in sawirro laga qaado maalmaha roobka ee BFF.
Haa, waxaa jira koofiyad baaldi maalin iyo habeen ah. Haddii aad rabto inaad xirato koofiyad daabacan laakiin aadan hubin haddii aad rabto muuqaal geesinimo leh, daabacaddan laba geesoodka ah ee loo yaqaan 'cherry print / hat hat' waa doorashada ugu fiican. Ma jeceshahay jeeriga? Haddii aad leedahay dhadhan dhexdhexaad ah, dheeh-cadaan-caddaan ah ayaa fiicnaan doona.
Waxa kale oo aad ka shakin kartaa isbeddellada moodada haramcadka iyo daabacaadda maqaarka abeesada markii ugu horraysay ee ay muuqdeen, laakiin rumayso daabacaadda 'cow-cow' ayaa hubaal kugu kori doonta. Haddii aad billowday inaad jeceshahay ka dib markii aad ku aragtay astaamaheeda boqolaal fiidiyow oo TikTok OOTD ah, markaa haddaad tahay qof jecel moodada dhiirran, waxaad ogaan doontaa inay tani tahay mid casri ah oo lahaan karo.
Koofiyaddan gacmeedku waxay ka samaysan tahay 100% maro jilicsan oo jilicsan oo aad u jilicsan tahay oo aad xitaa rabto inaad ku seexato. Ka fikir sida koofiyad gacmeed kalluumeysato ah oo riyadaada ah.
Si aan runta u sheegno, koofiyad kasta oo baaldi ah waxay noqon kartaa unisex, laakiin koofiyaddan caanka ah waxay isticmaashaa midabbo dhexdhexaad ah iyo astaanta caanka ah ee Adidas, qaab kastoo aad doontaba ha noqotee, waxay dadka siin kartaa muuqaal isboorti, muuqaal iyo mood moodo. dareemo.
Way yar yahiin, markaa iska hubi inaad ka weynaato (oo mid dheeri ah hel maxaa yeelay lamaanahaaga ayaa laga yaabaa inuu tan kaa xado).
Koofiyaddan dib loo rogi karo ayaa ah mid khafiif ah, adkeysi badan leh isla markaana biyuhu xireen, oo loogu talagalay maalmaha ugu kulul banaanka. Labada inch ee ballaaran ayaa sidoo kale ka ilaalin kara madaxaaga iyo qoortaada qorraxda (laakiin ha iloobin inaad marisid shaashadda qorraxda!).
Dharka suede ah ee macmalka ah kaliya kuma habboon safarka, laakiin sidoo kale waa mid aad u xiiso badan oo moodada ah. Haddii aadan rabin inaad isku daydo midabyo dhalaalaya ama qaabab wali, tani waa hab fiican oo lagu helo wax u gaar ah.
Wax qarsoodi ah maahan in moodadu noqon karto nooc awood badan oo gudbinta macluumaadka ah. Koofiyadan baaldi ee loo yaqaan 'Cross Colors' oo ay ku xardhan tahay "Awood Dadka Loo Leeyahay" ayaa ah tusaalaha ugu fiican.
Haa, waxay umuuqataa mid aad uqurux badan, laakiin qeybta ugufiican ayaa ah inaad iibsato koofiyadan, waxaad taageereysaa astaan ​​kaa caawineysa dhisida suuq moodel ku saleysan dhalinyarada madow.
Ku muuji asxaabtaada iyo faanka nambarkan dhalaalaya, laga bilaabo safka ilaa xisbigaaga hufan, hubaal waxay soo jiidan doontaa isha (ama afar). Si kastaba ha noqotee, qaybtani waxay kaa baryeysaa meel ka mid ah shabakaddaada Insta.
Haddii barafku uusan joojin jacaylkaaga koofiyadaha baaldi, markaa taasi waa waajib. Faux dhogorta ayaa noqotay mid caan ah, laakiin midabkeeda neon ayaa ka dhigaysa mid xiiso badan (oo raaxo leh!).
Markii ay soo kordheen isboortiga moodada iyo waqtiga firaaqada ah, Nike waxay noqotay mid ka mid ah noocyada ugu moodada badan. Isku dar astaantooda astaanta u leh isbeddelka koofiyadaha baaldiga, qaar ka mid ah casaan-qaadaha sanadlaha ah ee casriga ah iyo dharka-la isku dhejiyo, waana inaad haysataa waa inaad yeelataa.
Gunno: Waxay ku leedahay faashad qabow gudaha, taas oo aad ugu habboon jimicsi iyo maalmaha xagaaga kulul.
Maya, denim kaliya maahan baahi loo qabo surwaal. Koofiyaddan ayaa dhab ahaantii ka samaysan 100% cudbi ah, sidaa darteed gebi ahaanba waa la neefsan karaa, naqshadda duugoobayna waxay ku dareysaa xiiso, dareemo hoose.
Haddii aad horeyba u leedahay dhidid dhudhun ah, lebbisyo iyo rajabeeto isboorti, tani waa waxa kaliya ee aad ugu baahan tahay inaad ku dhammaystirto muuqaalkaaga. In kasta oo mararka qaarkood, daabacaduhu ay adag tahay in lagu waafajiyo dharka, midabka dhexdhexaadka ah ee sheygan hal-abuurka ah ayaa ka dhigaya mid la mid ah sida koofiyad cad ama madow baaldi madow
Hagaag, markaa maahan sida saxda ah koofiyad baaldi, laakiin shirkadda Amazon ee ugu iibinta badan ee loo yaqaan 'Hairbrella' ayaa uqalma booska liistada koofiyad kasta. Koofiyada ka samaysan satin-safka ah ee aan biyuhu xirnayn ayaa si gaar ah loogu talagalay inay timahaaga ka ilaaliso qoyaanka iyo roobka, sidaa darteed cimiladu marna dib uma qurxin doonto timahaaga.
Maqaarka min madax ilaa cirib marwalba waa fikrad fiican, haddana runti waa macquul. Naqshadda jilicsan iyo qarka hoose ayaa sidoo kale ka dhigaya mid neefsanaya.
Haddii aad rabto inaad muujiso timahaaga oo dhammaystiran ama aad raadineyso koofiyada baaldiga ugu neefsashada badan, koofiyaddan baaldi ee ubaxa ah ee hufan waa mid aad u qurux badan. Tani waa hab fiican oo loogu daro (macno ahaan) qaab fudud dharkaaga adigoon culeyskaaga yareyn.
Haa, koofiyadaha baaldi dhammaantood waa qiyaastii 90-meeyadii, laakiin haddii aad rabto inaad dib ugu soo celiso muuqaal gadaal u eg, koofiyaddan baaldiga midabada leh ee midabada leh ayaa aad moodada u ah waxayna u tahay dab-demiskaaga xiga.
Koofiyaddan baaldi waa mid qalooca oo leh naqshad jilicsan. Waxay umuuqataa waxa Daphne Bridgerton xiran laheyd markay shukaansanayeen jardiinada, laakiin jooniska dillaacsan, xarkaha iyo funaanadaha. Waxay sidoo kale kufiican tahay sakhraamidda sakhraansan.
Moodelkan waxaa sidoo kale loogu talagalay fiilooyin bir ah oo qafiif ah oo lagu dhejiyay dharka si loo keeno muuqaal dhalaalaya oo dhalaalaya.
Haa, kani xoogaa waa qaali. Laakiin haddii aad raadineyso shey abuuri kara muuqaal muuqaal ah habeenkii, 365 maalmood sanadkii, waa tan. Inta udhaxeysa rivets iyo dharka maqaarka macmalka ah, waxay ku dari doontaa dhalaal dhar kasta.
Haddii aad jeceshahay koofiyadaha qorraxda ee tayo sare leh, laakiin aad neceb tahay dareenkooda adag (iyo sida ay ugu adag tahay inay xirxiraan fasaxa!), Isku-dhafkan koofiyadaha qorraxda ee floppy iyo koofiyadaha baaldiga ayaa jawaab u ah salaadda safarka xeebtaada.
Waxay leedahay geedo ballaadhan oo dheeri ah, taas oo ka dhigaysa sida dalladda xeebta ee safarka. Intaa waxaa dheer, 100% dharka cudbiga ah ayaa ka dhigaya mid neefsanaya.
Haddii aad raadineyso alaab tayo sare leh oo ay tahay inaad haysato shay aad xiran karto inta lagu jiro sannadaha safarka, jimicsiga, iwm, markaa dharka Sweety Betty ee tayada sare leh kuma deynayaan. Haddii aad sidoo kale jeceshahay midabada madow ee dharka, waxaad ku heli kartaa buluug buluug ah.
Haddii tani aysan ku qaylinaynin "wax qurux badan", anigu garan maayo waxay tahay. Koofiyaddan ayaa hubaal ka kicin doonta jawaabaha xamaasada leh ee taageerayaashaaga Insta iyo BFF, koofiyaddani waxay shakhsiyad ku dari doontaa dhar kasta. Intaas waxaa sii dheer, waxay leedahay jaangooyooyin cabbir khiyaano leh si aad ula wadaagi karto asxaabtaada (digniin cadaalad ah: way kaa baryi doonaan inaad tan amaahato).
Wali miyaad dooneysaa inaad kuhesho muuqaal bir ah oo miisaaniyadeed miisaaniyadda dhexdeeda? Koofiyaddan baaldi waxay ka yar tahay $ 20. Qiimahan, waxaad xaqiiqdii ubaahan doontaa lacagtiisa iyo dahabkeeda. U isticmaal inaad ku darsato dhalaalka jooniskaaga iyo funaanaddaada muuqaal, ama ku laabo labis qurxoon habeenkii oo dhammaan dibadda u bax.
Waa inaad ogaataa inuu qof ubaahan yahay hadiyad ahaan koofiyadan baaldi eey ah. Haa, qofkaasi wuxuu noqon karaa adiga.